Association Fitia » Mot de bienvenue de la première dame pour le lancement de la campagne de sensiblisation de la lutte contre la violence basée sur le genre et le mariage précoce des enfants 25 Avril 2019 – C.C.I Ivato
Andriamatoa sy ramatoa isan’ny mpikambana ao amin’ny governemanta,
Andriamatoa sy ramatoa solon-tenan’ny Masoivoho eto Madagasikara,
Ianareo ao anaty fikambanana samy hafa, mpiantsehatra amin’ny fiainam-bahoaka,
Ianareo ray aman-dreny, zokiolona hajaina,
Ianareo rehetra manan-kaja manatrika etoana,
Ianareo solon-tenan’ny tanora sy ny ankizy,
Fifaliana ho ahy no misaotra anareo izay namaly ny fanasana ka tonga maro eto androany. Arahaba tongasoa eto amin’ity toerana ity. Ny fahatongavanareo maro be toy izao dia raisiko ho finiavana sy fahavononana hifanome tanana hiaro ny zon’ny vehivavy, ny lehilahy, ny tanora ary indrindra ny ankizy.
Tsapako fa isika rehetra mihitsy no mitovy fomba fijery ka vonona hampitsahatra ny herisetra.
Anton’izao fivoriantsika eto izao ny fanombohana ny fanentanana mikasika ny ady amin’ny herisetra. Betsaka ny dingana tokony lalovatsika momba izany. Tsy vitan’ny resaka am-bava fotsiny ny famongorana ny herisetra fa mila fandraisana andraikitra. Ho atao laharampahamehana noho izany ny famolavolàna lalàna miompana manontolo amin’ny ady amin’ny herisetra mba ho fiarovana ny zon’olombelona.
Mpiara-miombonantoka fototra amin’izao ady amin’ny herisetra izao ny rantsan’ny Firenena mikambana misahana ny mponina na ny FNUAP. Tolorako fisaorana eram-po eran-tsaina izy ireo amin’ny fiaraha-miasa rehetra teo aloha / sy izay mbola hiarahana.
Tsy ho vita irery ny ady amin’ny herisetra fa mila fiaraha-miasa amin’ireo rafitra samihafa toy ny ny Ministeran’ny
Filaminam-bahoaka, ny Ministeran’ny Fitsarana ary ny Ministeran’ny Mponina izay miara-miasa amin-kitsipo
hatrany. Izay indrindra no anton’ny tsy nisalasalako hihaona tamin’ny Ministry ny Filaminam-bahoaka, andaniny, ary ny Ministry ny Fitsarana, ankilany.
Noresahanay ny fahafahana mametraka rafitra hisorohana ny herisetra, hanafaizana ny tomponantoka amin’izany ary ny hanohanana sy handraisana antanana ireo hianjadian’ny herisetra.
Voaresaka ihany koa ny fahafahana mametraka Fitsarana manokana misahana ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny miralenta.
Tsy hijanona hatreo ny fikarohana vahaolana, fa mbola vonona aho hifampiresaka amin’ireo mpiaramiombon’antoka hafa.
Androany isika hihaino ny tantaram-piainana maro samihafa izay mety hampalahelo, hanohina ary mety hanaitra, kanefa tena zava-misy niainan’ireo ray amandreny, zoky, zandry ary zanaka. Samy nandalo lalampiainana sarotra izy ireo teo amin’ny fiainany ary nanaiky an-tsitrapo hizara izany amintsika eto. Misy ireo vehivavy sy lehilahy niharan’ny herisetra ara-batana ka mitondra takaitra mihitsy. Misy koa ny lehilahy izay nanao herisetra saingy efa niova fo, nahatsapa fa fitondran-tena tsy mendrika izany. Misy koa ny ankizivavy niharan’ny fanolanana.
Ny mampitovy azy rehetra ireo anefa, dia ny finiavana hivoatra ka tafavoaka tamin’izany olana nangeja azy ireo izany.
Mino aho fa miara-manaiky amiko ianareo, fa mendrika ho deraina izany fahasahin’izy ireo izany. Koa manasa antsika àry aho hiara-hitehaka, ho fanomezamboninahitra sy fisaorana azy ireo.
Eto aho dia manao antso ho antsika rehetra mba hiarahientana, hifanome tanana hamongorana ny herisetra, na aiza na inona ny sehatra misy antsika. Matoky aho, fa na ny mpanabe, na ny Andrimpanjakana, na ny Fikambanana, na ny mpitantana ara-panjakana isantsokajiny, na ianao na izaho, dia samy afaka mitondra ny anjara biriky avokoa ho fampitsaharana ny herisetra.
Manomboka amin’ny fisorohana, ny fampiharana ny sazy, ny fitantanana ho amin’ny vahaolana mahomby, mba hahafan’ireo namantsika izay nitondra takaitra hanana indray ny mahaizy azy eo anivon’ny fiarahamonina. Manantena isika fa izao fivoriana androany izao dia hanampy ny tsirairay avy hanana fomba fijery vaovao mikasika ny herisetra sy ny fampanambadiana an-katerena aloha loatra.
Koa mitodika indrindra aminareo zatra ny lalan-diso aho.
Fotoana izao hanovàna famindra. Fitondran-tena mamohehitra, ary helohin’ny lalàna ny herisetra.
Manaitra ny sainareo ihany koa aho mba hanao ho zavadehibe ny ady amin’ny fampanambadiana an-katerena ny
ankizy. Manana adidy voalohany indrindra amin’izany isika ray aman-dreny. Manana zo hianatra, manana zo miaina toy ny ankizy ny zanatsika. Miantso anareo ankizy koa anefa aho mba tsy ho maika hiroso amin’ny fanambadiana aloha loatra. Tsarovy lalandava rankizy fa ny fianarana no lova tsara indrindra, ny fianarana ihany no amin’azy e!!!
Eto am-pamaranana, mamelà ahy hanolotra anareo ireo mpiara-miasa amiko, mpikambana amin’ny Fikambanana Fitia. Izy ireo dia olona manana finiavana, voasedra, tsy mitsahatra miezaka mikaroka ny tsara hatrany foana ho amin’ny fivoarana sy ny fanaovana asa soa, ary miasa an-tsitrapo izy ireo. Samy resy lahatra avokoa izahay fa rehefa miray hina dia azo atao ny manome ny tsara indrindra ao anatinay ho an’ny mpiarabelona.
Koa manasa azy ireo handroso ety anoloana
Koa andao àry hiara-hiteny amin’ny feo iray hoe :
MELOHAKO NY HERISETRA !
Mankasitraka Tompokolahy, Mankatelina Tompokovavy !